Ubungqina bentliziyo ye-Virgin Deep Wave yaseBrazil Ubungqina bentliziyo ye-Virgin Deep Wave yaseBrazil
Ubungqina bentsimbi ye-Virgin Deep Wave yaseBrazil - I-Soie Virgin Hair Extensions
I-Brazilian Deep Wave Virgin Hair Frontals
Xabiso rhoqo $160.00
ubungakanani 12 14 16 18 20
Izinwele zethu eziqhelekileyo zaseBrazil zingumgangatho ophezulu kwaye ziqinisekiswe ukuba zizinwele ezintle. Izinwele zithatha imibala kakuhle kwaye zinokuphengulwa, zimibalabala, zihlanjululwe, kunye nesitayela kaninzi ngaphandle kokulahlekelwa ukukhanya kwayo.
yethu I-Brazilian Deep Wave Virgin Hair Frontals are ezenziwe kuphela kwizinwele zobuntombi ezintle kakhulu. Ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo zeenwele zaseBrazil lolu hlobo lwezinwele luhlobo oluphezulu. Izinwele zethu zaseBrazil zivunwa kubaxhasi abangakaze bazidaye ukwenza iinwele zihlale zihlala. Izinwele ziza kugcina iminyaka ye-2 okanye ngaphezulu ngenxa yamandla angenangqondo yeentloko zezinwele kunye ne-cuticles.